प्रचण्डले खुल्ला चेतावनी दिदै भने ’अब यही संसदले ओली सरकारलाई बिघटन गर्छ’ ! | सुदुरपश्चिम खबर
प्रचण्डले खुल्ला चेतावनी दिदै भने ’अब यही संसदले ओली सरकारलाई बिघटन गर्छ’ !
धनगढी- शनिबार धनगढीमा आयोजित प्रचण्ड-माधव पक्षको आमसभामा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । अदालतमा मुद्दा नभइदिएको भए आफूहरुले संसद्‍ बोलाउने र ओलीलाई कारवाही समेत गर्ने दाबी उनको छ ।
अरु प्रतिपक्षी दलहरुले समेत केपी ओलीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनेकाले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघात गरेको कुरा संसदबाट पुष्टि गर्नसक्ने प्रचण्डले चेतावनी दिए । यस्तै विकल्पको रुपमा सभामुखले बैठक बालाउनसक्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।
यसबाहेक ओली समूहमा लागेका पूर्वमाओवादीका नेताहरुप्रति आक्रोश पोखेका थिए । धनगढीकै नेता समेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई लक्षित गर्दै उनले ’दलालको पनि दलाल’ भएको संज्ञा दिए ।
’आफैँले हुर्काएको मान्छे छोप्नै नसकिने गरी दलालको पनि दलाल भएर गए,’ प्रचण्डले भट्टलाई लक्षित गर्दै व्यंग्य गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दलाल र भट्टलाई दलालको पनि दलाल भन्दै आक्रोश पोखे । यस्तै धनगढीमा सुदूरपश्चिमका ९५ प्रतिशत नेकपाका नेताहरू आफ्नो पक्षमै अडिग रहेको उनले दाबी गरे ।
कार्यक्रममा माधवकुमार नेपाल, भीम रावललगायत नेताले सम्बोधन गरेका छन् ।